Isifundo: Ungazi njani ukuba kukho umntu okufumanayo 'Fumana Abahlobo bam' | IPhone iindaba
UApple ufuna ukunika umsebenzisi ulawulo ngakumbi lwabucala, icandelo eliphuculwa ngakumbi kwi-iOS 7. Ngokuchanekileyo kule nguqulo yenkqubo yokusebenza yenkampani esiyifumanayo. Iinkcukacha ezithe kratya malunga nesixhobo se-geolocation. Ngoku i-iOS isixelela ukuba zeziphi izicelo ezisebenzise indawo ekuyo i-iPhone, iPod Touch kunye ne-iPad kwaye ngaliphi ixesha.
Omnye wemibuzo ebuzwa kakhulu ngabasebenzisi abasebenzisa usetyenziso lwe-Apple «Fumana Abahlobo Bam», ukufumana abafowunelwa bethu emephini, kukuba ngaba ikhona indlela yokwazi xa umntu eye wazama ukukufumana. Impendulo ethe ngqo kukuba akukho ndlela yokwazi ukuba umntu othile ebekufumene kwimephu kutshanje, kodwa ukuba unabahlobo abambalwa abakulandelayo kwi "Fumana Abahlobo Bam", kulula ukufumanisa.
Eli liqhinga lokusebenzisa. Kuqala, siza kubona ukuba ngaphezulu kwescreen sefowuni sisebenza, ngalo mzuzu, itolo yendawo. Ukuba kunjalo, oko kuthetha isicelo sizama ukufumana indawo esikuyo indawo eyayikuyo ngelo xesha. Ukubona ukuba zeziphi izicelo ezisebenzisa indawo esihlala kuyo, siya kule ndlela ilandelayo:
Useto- Ubumfihlo- Indawo.
Ukuba asivulanga isicelo «Fumana Abahlobo Bam» kutshanje, kodwa siyabona ukuba inye utolo ecaleni kwe «Abahlobo», kungenxa yokuba unxibelelwano oluthile luzamile ukusifumana. Njengokuba besesitshilo, ukuba unoluhlu olufutshane lwabahlobo, akusayi kuba nzima kuwe ukufumanisa ukuba ngubani na.
Las iintolo Banombala owahlukileyo ngokuxhomekeke ekusetyenzisweni kwendawo:
Utolo luzaliswe mfusa: Isicelo sisandula ukusebenzisa indawo okuyo.
Utolo oluNgwevu: isicelo sisebenzise indawo okuyo kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo.
Utolo olunombala omfusa: Iiapps ezisebenzisa iperimeter ebonakalayo kwindawo okuyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe- Ubomi bomntu ongaqhelekanga owebile i-iPhone yam, impumelelo entsha kwiTumblr
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Isifundo: Ungazi njani ukuba umntu uyakufumana 'Fumana Abahlobo bam'
Kodwa ayisiyonto intsha kwi-IOS7, kwi-IOS6 injalo.
Ukunyuka okumangalisayo ngokulula, iApple App yeVeki
I-LockBar Pro: Iziko elincinci lolawulo eliphefumlelwe yi-iOS 7 ye-iOS 6 (Cydia)